Vaovao - Fampandrosoana sy fampiharana ny mika sentetika
Fampandrosoana sy fampiharana ny mika sentetika
Ny Mica dia anaran'ny ankapobeny an'ny mineraly silicate misy sosona, miaraka amin'ny toetran'ny insulation, mangarahara, fanoherana ny hafanana, fanoherana ny harafesina, fisarahana mora sy fanalana ary feno elitika. Izy io dia be mpampiasa amin'ny kosmetika, plastika, fingotra, fonosana, fisorohana ny harafesina, haingon-trano, fanariana, fanariana, fitaovam-pananganana ary sehatra hafa, mitana andraikitra lehibe amin'ny toekarena sy ny fananganana fiarovana.
I. Fikarohana sy fampandrosoana ny mika sentetika
Raha ny filazan'ilay "mika synthetic", tamin'ny 1887, ny mpahay siansa rosiana dia nampiasa fluoride hanamboarana ny mica fluoropoly voalohany tamin'ny fiempoana; Tamin'ny 1897, nandinika ny fepetra fananganana mineraly i Russia tamin'ny taona 1919, nahazo ny patanty voalohany ny orinasa Siemens - Halske. an'ny mika sentetika; nitazona ny valim-pikarohana rehetra momba ny mika sentetika i Etazonia taorian'ny ady lehibe faharoa .Raha ny fanoherana ny maripana avo lenta dia fitaovana fiarovana sy teknolojia lehibe io, nanohy ny fikarohana nataon'ny fanjakana amerikana tamin'ity sehatra ity.
Amin'ny dingana voalohany pg Sina, ny mika voajanahary dia mety hanome fahafaham-po ny toekarem-pirenena sy ny fampandrosoana. Saingy, noho ny fivoaran'ny angovo haingana, ny indostrian'ny aerospace, ny mica voajanahary dia tsy afaka nameno ny fepetra takiana intsony. Nanomboka nianatra mika sentetika ny andrim-panjakana sinoa sasany.
Ireo andrim-pikarohana siantifika miaraka amin'ny sekoly, governemanta ary orinasa dia nanao ny fikarohana sy ny famokarana mika sentetika niditra amina dingana matotra mandraka ankehitriny.
II. Ny tombony azo avy amin'ny mika sentetika raha oharina amin'ny mika voajanahary
(1) Kalitao miorina noho ny fomban-javatra sy ny ampahany mitovy amin'ny akora
(2) Fahadiovana avo & insulate; tsy misy loharano taratra
(3) vy tsy dia mavesatra loatra, fenoy ny fenitry ny fanjakana eropeana sy United.
(4) Mamirapiratra sy fotsy fotsy (> 92), volafotsy vita amin'ny perila volafotsy.
(5) Fitaovana pigmentan'ny perila sy kristaly
III. Fampiasana feno ny mika sentetika
Ao amin'ny indostrian'ny mika dia ilaina ny mampiasa feno ny fika mika eo anilan'ny ravin-mika lehibe Ity no fampiasana feno ny mika sentetika toy izao manaraka izao:
(1) manamboatra vovoka mika
Endri-javatra: Sliding tsara, fandrakofana mafy sy adhesion.
Fampiharana: firakotra, seramika, anti-harafesina ary indostria simika.
Huajing synthetic mica dia manana ny fanamboarana, ny mangarahara ary ny tahan'ny lafiny lehibe, izay fitaovana tsara indrindra amin'ny loko perila.
(2) keramika mika synthetic
Ny keramika mika synthetic dia karazana fitambarana, izay manana tombony azo avy amin'ny mika, seramika ary plastika. Izy io dia manana fitoniana dimensional, insulation tsara ary fanoherana ny hafanana.
(3) Famokarana vokatra
Izy io dia karazana fitaovana insulated anorganika vaovao miaraka amin'ny fanoherana ny hafanana avo, ary ny fanoherana ny harafesina.
Tombony: insulation avo, tanjaka mekanika, fanoherana taratra, fanoherana oksizena sns.
(4) Takelaka fanafanana herinaratra mika synthetic
Ity dia fitaovana vaovao miasa, izay namboarina tamin'ny alàlan'ny fandokoana sarimihetsika semiconductor amin'ny takelaka mika synthetic. Amin'ny maha fitaovana ho an'ny kojakojan-tokatrano azy dia tsy misy setroka sy tsy misy tsirony izy io eo ambanin'ny maripana ambony, noho izany dia be mpampiasa sy mivoatra haingana ankehitriny.
(5) pigmenta mika synthetic
Satria ny mika sentetika dia fitaovana artifisialy, ny akora azo ampiasaina dia mety hanana fifehezana tsara. Noho izany, ny metaly mavesatra sy ireo singa manimba hafa dia mety hisorohana hatramin'ny voalohany .Ny mika sentetika dia manana fahadiovana, fotsifotsy, hamirapiratra, fiarovana, tsy misy poizina, fiarovana ny tontolo iainana ary mahatohitra maripana avo .Mba ampiasaina amin'ny plastika, plastika, hoditra, kosmetika, lamba, seramika, indostrialy fanorenan-trano sy haingon-trano.Ho amin'ny fampiroboroboana ny teknolojia mika sentetika, misy akony lehibe eo amin'ny fiainana andavanandro izany, hampiroborobo haingana ireo indostria mifandraika amin'izany.